တင်တဲ့ Post ကနေ လိုအပ်တာကို သိရှိနိုင်မယ့် Facebook ရဲ့ AI စနစ်
Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Share on Facebook Share on Twitter +0Shares
377 Views Home NEWS Local HOW TO FEATURES Knowledge Interview Home NEWS Mobiles & Tablets Softwares & Application Audio & Video Automobiles Gaming Pc & Laptops Photography Gadgets Security & Safety Local Local News Local Market Review HOW TO Audio & Video Mobiles & Tablets Softwares & Application Life Style FEATURES Audio & Video Mobile & Tablets Pc & Laptops Life Style Knowledge Day in Tech History Others Interview Random Download Android iOS Window FUNNY PHOTOS HUBS Android Apple Samsung Facebook HUBS NEWSတင်တဲ့ Post ကနေ ကိုယ်လိုအပ်တာအကုန်လုံးကို သိရှိနိုင်မယ့် Facebook ရဲ့ AI စနစ်သစ် U Min Thant Jun 03, 20160377
Facebook ဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် လူလုပ်သိဥာဏ်တု AI စနစ် “DeepText” မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Post သန်းပေါင်းများစွာထဲက မတူညီတဲ့ ဘာသာစကား အမျိုး ၂၀အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြန်လည်ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင် မကြာမီမှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ Profile နဲ့ တခြား Page တွေကနေတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့ Post တွေ၊ Messages တွေနဲ့ တခြား Content တွေကနေ အခြေခံပြီး သင့်အတွက်အကူအညီဖြစ်စေမယ့်အရာကို အကြံပြုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Comments Artificial IntelligenceSOCIAL MEDIA
About U Min Thant U Min Thant is the nick name of Min Thant. He loves english language and translator life. At the past time he hasn't the experience of translation. He prefer writing about Technology and Sciences Technology Things. And his hobby is to watch movies and read books. So he wants to translate many Movies and Books too. In his free time, you'll find U Min Thant in front of the TV and polish his phone. View all posts by U Min Thant Previous articleလမ်းသွားရင်း ဖုန်းတွေကိုကြည့်လွန်းတဲ့လူတွေအတွက် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှမီးပွိုင့်များ
Next articleကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ၁၇ လက်မအရွယ် 2-in-1 လက်ပ်တော့ကို Dell စတင်မိတ်ဆက်
You may be interestedFEATURES, Mobile & Tablets, Softwares & Application123 shares176 viewsသင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းKo Thuya - May 25, 2017သင့် စမတ်ဖုန်းကို လုံခြုံစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း က ဘာလဲလို့ မေးရင် အဖြေကတော့ အလွန် ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါက စကရင်ကို Lock လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမတ်ဖုန်း ပိုင်ရှင် အများစုဟာ အခြေခံကျပြီး အစွမ်းထက်တဲ့ လုံခြုံရေးကို…FEATURES, HUBS, Mobile & Tablets167 shares248 viewsVivo V5 ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းKo Thuya - May 25, 2017Vivo V5 ဟာ Selfie အထူးပြု စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်မှာ 20MP Camera တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ အနောက်ကင်မရာကလည်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Chipset က စွမ်းရည်သင့်တင့်ပါတယ်။ HD Display သာ တပ်ဆင်ထားတာက အားနည်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။…HUBS, Local, Local News87 shares110 viewsအူရီဒူးမြန်မာမှ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်သည့် သီးသန့် ကွန်ရက် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှု စတင်Thoe Gyi - May 25, 2017အူရီဒူးမြန်မာအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် မြန်ဆန်သည့် အင်တာနက်ဖြင့် IP-VPN ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် ၀န်ဆောင်မှုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ IP-VPN သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ရုံးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နယ်မြေဒေသအသီးသီးတွင်ရှိသည့် ရုံးခွဲများအား အချိန်တိုင်းအစဉ်မပြတ် သီးသန့်ကွန်ရက်ဖြင့် အဆက်အသွယ်ရှိနေစေနိုင်မည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ယင်း ဝန်ဆောင်မှုသည် လူအများစုမှတစ်ပြိုင်နက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊… LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.Most from this categoryFacebook, HUBS, NEWS153 shares133 viewsFacebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီzayarsan - May 25, 2017Acer, FEATURES, HUBS154 shares244 viewsAcer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များThoe Gyi - May 25, 2017Drone, Gadgets, Gadgets0 shares22 viewsလက်ဟန် ခြေဟန် နဲ့ ခိုင်းစေလို့ရမယ့် ဒရုမ်း ကို မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခန့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလို့ ရရှိနိုင်zayarsan - May 25, 2017Gadgets, HUBS, Knowledge700 shares907 viewsမြန်မာငွေ ၃ သိန်း ခန့်သာ ရှိမယ့် MiMax2ကို ရှောင်မီ ထုတ်ဖော်ပြသzayarsan - May 25, 2017 Our Picks Facebook, HUBS, NEWS153 shares133 viewsFacebook မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူ Live Video တင်နိုင်ပြီzayarsan - May 25, 2017Acer, FEATURES, HUBS154 shares244 viewsAcer က အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop နဲ့ tablet များThoe Gyi - May 25, 2017Drone, Gadgets, Gadgets0 shares22 viewsလက်ဟန် ခြေဟန် နဲ့ ခိုင်းစေလို့ရမယ့် ဒရုမ်း ကို မြန်မာငွေ ၆ သိန်းခန့်ဖြင့် ၀ယ်ယူလို့ ရရှိနိုင်zayarsan - May 25, 2017Most Popular